Nei 2016 Ichave Global Tipping Point yeMafaro Ehupfumi | Martech Zone
Masayendisiti muAntarctica ari kurodha pasi nharembozha. Vabereki muSyria vanonetseka nezvevana vanoshandisa yakawandisa tech. Vachitsuwa muAmerican Samoa vanobatana ne4G, uye sherpas muNepal vanotaura pamafoni avo vachikwenya makumi manomwe-mapaundi mitoro.
Hupfumi hwenhare huri inosvika kune yepasirese yekubatira poindi.
Global mobile vashandisi, ine data kubva kuNokia uye TUNE
Tinonzwa huwandu hukuru nguva dzese. 800 mamirioni vatsva vanyoreri nharembozha gore rino, pasirese. Mazana mazana matanhatu emamiriyoni muna 600. Wedzera zvese pamwe nevashandisi ve smartphone varipo, uye pachave nenhengo dzemamirioni mazana matanhatu nemazana mashanu ezviuru zvechikwata ichi muna 2016.
Iyo yekumisikidza poindi?
Muna 2015 ingangoita 47% yepasi yakanga iine smartphone, sekureva kwa Nokia data. Muna 2016, iyo nhamba ichapfuura kupfuura 50% mucherechedzo, ichisvika padyo ne4 bhiriyoni Mune mamwe mazwi, kukura nekukurumidza kupfuura huwandu hwepasirese, iyo parizvino yave kungangoita 7.3 bhiriyoni.
TUNE inoona yakawanda m-commerce uye zvekutora kurodha pasi kubva kuIndia kupfuura chero imwe nyika, zvakaenzana.
Ndicho chikonzero nei mukuwedzera kumazana emamirioni evashandisi vema smartphone muUS, 86% nguva yefoni yakashandiswa mumaapps munyika dzakasimukira, iyo kukurumidza kukura m-commerce muUS munzvimbo dzekupedzisira, uye basa rakakura re m-commerce mu mobile-yekutanga nyika yeIndia (kuwedzera padiki padiki, China)… tiri kuona nguva yakakosha mukuchinja kukuru kwevafambisi izvo kushanda kune, vashambadziri vanga vachinzwa nezvazvo, uye mabhureki anga achitarisira.
Chii chakanyanya kukosha nezvepfungwa iyi?
As GameStop, semuenzaniso, akandiudza: yako-vanoshandisa vatengi vanokosha zvakapetwa ako epamusoro-kukosha kukoshesa kirabhu vatengi. Uye, hupfumi-yekutanga hupfumi inogonesa ese marudzi emikana mitsva. Isu takaona kutanga kwayo kuona mumabhizimusi epasirese akavakirwa pamusoro pemapurogiramu efoni senge Uber, AirBnB, Amazon, zvichingodaro. Iyo inotevera wave ndiyo Sephoras, Sonys, Staples, uye mamwe makuru mabhizimusi uye mabhizinesi ayo ari kutanga kugadzira one-on-one kushambadzira uye hukama hwevatengi nekutevera kwavo, vashandisi, madzinza, kana vatengi ... uye vozotanga kumutsidzira iwo chaiwo iwo pfungwa zvinorehwa nemabhizinesi avo muhupfumi-hwekutanga hupfumi.
Mitambo yakakura. Asi isu tiri kuona iri kubuda fuma hupfumi mukutenga, kutakura, mararamiro, uye zvemagariro maapplication.
Dhoni dhirivhari? Pamwe kwete ipapo ipapo.
Asi Uber-yakabatsira ingori-mu-nguva kuendesa kwehofisi zvigadzirwa kubva kuStaples izvo zvingangodaro zvakagara kwemaawa mashoma munzvimbo inotungamirwa inotungamirwa neAmazon? Chinhu chakadai hachisi kure kure mune ramangwana.
Nhare mbozha dzemitambo dzakadai saSupercell, Kabam, Machine Zone, Electronic Arts, uye King ndivo vakatanga kuratidza pasi rose mari yekuita nhare. Asi iyo $ 70-100 bhiriyoni iyo nyika ichashandisa mukutenga-mukati-app mune mashoma makore mashoma nguva ichave ishoma neiyo $ 500-550 bhiriyoni ichapedza pazvinhu zvisiri zvemhando yepamusoro uye masevhisi akatengwa kuburikidza nharembozha asi achiendeswa, pane imwe nhanho, mune chaiko nyika.
Uye muchokwadi ichocho, kuve nhare-yekutanga hakuzove nezve kubudirira. Zvichava zvekupona.
Iyi posvo yakavakirwa pamushumo na TUNE.
Dhawunirodha Chirevo Chizere Pano!
Tags: pezvitsigamitambom kutengeseranaMobile Appsnharembozhanhare kutangamobile marketingsmartphonechuna